कलेजो कसरी स्वस्थ राख्ने ? – rastriyakhabar.com
कलेजो कसरी स्वस्थ राख्ने ?
के–के जाँच्ने रु
– रगत, पिसाब, आवश्यकता अनुसार भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान, इन्डोस्कोपी
–एलएफटी रगतबाट कलेजो जाँच्दा
– रगतमा हेपटाइटिस बि, सि
– पिसाबमा खराबी– युरिन आरइ, एमइ
– रगतमा बोसोको मात्र उच्च हुन सक्छ
– बल्ड सुगर, युरिक एसिड उच्च हुन सक्छ
– भिडियो एक्सरे गर्दा कलेजो खुम्चिएको, पेटमा पानी जमेको, फियो सुन्निएको
– सिटी स्क्यान आवश्यकता अनुसार
– इन्डोस्कोपी आवश्यकता अनुसार
– जन्डिस रहिरहने ९आँखाबाट पहेलोपना सुरू भएर शरीरका अन्य भागमा देखापर्ने र बढ्ने पहेलोपना० र पहेलो पिसाब
– खाना मन नलाग्ने, बान्ता हुने, आलस्य, कमजोरी
– खुट्टा सुनिन्ने, फुल्ने
– पेट फुल्ने,पेट ठूलो हुने
– छाला गलेर आउने, पातलो दुब्लो हुने
– केटा मान्छेको स्तन बढेर आउने
– चोट लाग्दा रगत बगिरहने
– पेटमा पानी जम्नाले पेट फुल्छ । सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
– खुट्टा फुल्ने, सुनिन्नेहुँदा काम गर्न, हिँड्न गाह्रो हुने ।
– बान्तामा रगत आउने, दिसामा रगत आउने, दिसा कालो हुने ।
– बोली लरबरिने, बेला–बेलामा होस गुमाउने, दिनमा सुत्ने, रातमा बर्बराउने ।
– पिसाबमा कमी हुने ।
– सास फेर्न गाह्रो हुने, केही पाइला हिँड्न पनि कठिन हुने ।
– कलेजोको क्यान्सर
सिरोसिस भएका बिरामी जन्डिसको उपचार गर्दै हिँडेको देखिन्छ । जन्डिसको उपचार गर्दै यो रोग निको हुन्न । जन्डिस भनेको कलेजो खराब भने बुझिन्छ, यो आफंैमा कुनै रोग होइन । जन्डिस गराउने कलेजो रोगको उपचार गर्नुप¥योतर बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ रक्सी बिल्कुलै बन्द गर्नुपर्छ, चुरोट खानु हुँदैन ।
– लिवर टनिक जन्डिसको सफल उपचार
– लिवर टनिक खाएपछि रक्सी खान हुन्छ
– लिवर टनिक खाएपछि कलेजो बिग्रन्न
के बार्ने, के नबार्ने रु
– जन्डिसमात्र हुँदा पानी ज्यादा पिउने भनिन्छ तर सिरोसिस भइसकेपछि अध्यधिक पानी नपिउने । जति पिसाब लाग्छ, त्यति जति नै पानी पिउने ।
–मुख नमिठो हुने हुँदा मीठो पानी ९ग्लुकोज पानी०, फलफूलको जुस खाने भनिएको हो । फलफूलबाट पानीको विकल्पको साथमा स्वादिलो र तागत पनि आउँछ ।किलेजोलाई असर पनि गर्दैन । उखु पेल्ने हात फोहोर छ भने फाइदा होइन उल्टो बेफाइदा बढी हुन्छ । ख्याल राख्नुपर्छ । पानी उमालेको या सफा फिल्टर गरेको हुनुपर्छ ।
– नियमित बिहान–बेलुका दाल–भात खान मिल्छ । तरकारी बनाउनको लागि प्रयोग हुने प्याज, तेल पनि प्रयोग गर्नु हुन्छ । तेलमा फ्राइ गरेको, तेलमा तारेको, जंक खाना, मम–चाउमिन नखाने ।
– कोक, फेन्टा, प्याकेटमा पाइने खाना नखाने ।